मैदाको अधिक सेवनले स्वास्थ्यमा हुने असर तथा समस्याहरु
मैदाको अधिक सेवनले स्वास्थ्यमा हुने असर तथा समस्याहरु अधिक मात्रामा मैदा खानाले मानिसको तौल बढ्न थाल्छ।
काठमाडौं– मैदालाई दैनिक प्रयोग गर्दा यसको असर तुरुन्तै देखिँदैन तर लामो समयसम्म प्रयोग गरेपछि भने हाम्रो शरीरमा यसका साइड इफेक्ट्स देखिन सुरु हुन्छ। यस्ता साइड इफेक्ट्सले दीर्घकालीन रुपमै हाम्रो शरीरमा असर र्पुयाउने पोषणविद डा. भुपाल बानियाँ बताउँछन्।
हामी सबैको भान्छामा मैदाले प्रयोग हुनु भनेको सामान्य कुरा हो। पुरी, सेल, मःमः वा अन्य पिठोबाट बन्ने परिकारमा हामी प्रायः मैदाकै प्रयोग बढी गर्छौं। तर तपाईंलाई थाहा छ, मैदा हाम्रो शरीरका लागि कत्तिको हानिकारक छ ? यसले हाम्रो शरीरलाई कतिसम्म असर र्पुयाउँछ ? मैदाले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरहरु यस्ता छन्।
जब ब्लडसुगरको मात्रा बढ्छ, तब रगतमा ग्लुकोज जम्न थाल्छ। यसले शरीरमा केमिकल्स रियाक्सन हुन्छ, जसले गर्दा कैटरैक्ट तथा मुटुको समस्या उब्जन्छ। त्यस्तै, मैदामा डाल्डा मिसाएको खण्डमा यो जनावरको बोसो भन्दा खराब हुन्छ, जसलाई सामान्य शब्दमा ‘ट्रान्सफ्याट’ भनिन्छ।
यसले राम्रो कोलेस्टोरललाई घटाएर खराब कोलेस्ट्रोरलको मात्रालाई बढाउँछ। जसले गर्दा मुटुका भल्भमा लेउजस्तो बस्दछ। यसले मुटुमा रोग लाग्नुका साथै हृदयघातको सम्भावनालाई बढाउँछ। विशेषगरी मैदाबाट बन्ने सेल, पुरी, समोसा, रोटी, मःम, डोनट लगायतका परिकारमा डाल्डाको प्रयोग गर्नाले शरीरका लागि घातक सावित हुन्छ।
मैदाबाट बनेका परिकार खानाले पेटमा पनि समस्या बढाउँछ। मैदाबाट बनेका धेरै परिकार खानाले आन्द्राको भित्तामा एकप्रकारको लेसिलो तह जम्दै जान्छ। जसका कारण शरीरमा पाचन प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। यसले कब्जियतको समस्या पनि बढ्छ। पेटको समस्याले मानिस बारम्बार विरामी भइरहन्छ।
गहुँलाई पेलेर मैदा बनाउँदा त्यसमा रहेका प्रोटिन, मिनरल्सको मात्रा समाप्त हुन्छ र त्यसमा प्रयोग भएका एसिडिक तत्वमात्र बाँकी रहन्छ। जसले हड्डीमा भएका क्याल्सियमलाई बाहिर निकाल्छ र हड्डीलाई कमजोर बनाउँछ।
अधिक मात्रामा मैदा खानाले मानिसको तौल बढ्न थाल्छ, जसले गर्दा तपाई मोटो हुन थाल्नु हुन्छ। यतिमात्र होइन मैदाको अधिक प्रयोगले कोलेस्टोरलको मात्रा तथा रगतमा ट्राइग्लिसराइड समेत बढ्छ। त्यसैले तपाईं तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो खानाबाट मैदालाई हटाउनु नै उचित हुन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६ १४:२८